26 qof oo lagu diley dalka mali – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 26 qof oo lagu diley dalka mali
26 qof oo lagu diley dalka mali
Lix iyo labaatan qof ayaa la dilay tuulona waxaa lagu gubay magaalada Mopti ee ku taal bartamaha Mali Jimcihii, sida ay sheegeen saraakiisha.
Weerarka ayaa lala beegsaday tuulo lagu magacaabo Binedama, ayuu yidhi Aly Barry, oo ah sarkaal ka tirsan Tabital Pulaaku, oo ah urur ka tirsan Fulani. Laba sarkaal oo kale oo maxalliga ah ayaa xaqiijiyay weerarka iyo tirada dhimashada wakaaladda wararka ee AFP, iyaga oo intaa ku daray in tuulada la gubay madaxana ay dileen madaxiisa.
Sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee Koro, oo hoosaad ka ah gobolka Mopti, ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in weerarkii Binedama uu dhacay galabnimadii Jimcaha.
Laba haween ah iyo gabar sagaal sano jir ah ayaa kamid ah dadka ladilay, ayuu yidhi isagoo kahadlaya xaalada magaceeda.
Moulaye Guindo, duqa magaalada Bankass, oo deris la ah qariidada ay leedahay Binedama, ayaa sheegay in inta u dhaxaysa 20 iyo 30 qof ay dileen rag ku labisan dharka militariga, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii kordhayaan nabadgelyo darrida ka jirta dalka Maali, sii kordheysa caro ku timaada dowladda, iyo kordhinta warbixinada ku saabsan tacadiyada ay geystaan ​​ciidamada qalabka sida ee dalka.
Sida la wada ogyahay weerarada badan ee ka dhaca dagaalada iyo gobolka fog ee gobolka Saaxil, markiiba lama cadeyn cida geysatay. Ma jirto koox weli sheegatay mas’uuliyadda.
Mali, oo ah ummad dhan 19 milyan oo qof, ayaa ku jirtay fallaagada tan iyo sanadkii 2012, markii dagaalyahannada mayalka adag ay hoggaamiyeen kacdoonkii gooni u goosadka ahaa ee ay sameeyeen qowmiyadaha Tuaregs ee waqooyiga.
Colaadda – oo dishay kumanaan askar iyo dad rayid ah illaa iyo hadda – ayaa tan iyo markii uu ku fiday bartamaha Mali, iyo sidoo kale dariska la ah Burkina Faso iyo Niger.
Muuqaalka qowmiyadeed ee bartamaha Maali wuxuu noqday meel kacsan. Dagaalyahannadu waxay si joogto ah u weeraraan bartilmaameedyada milatariga ee gobolka, halkaas oo dagaalku uu dhaliyay xiisadda qowmiyadeed.
Previous articlewarbixintii ugu danbeysay maanta covid19 somaliland
Next articleHappiness is not far … here are 20 ways
Wasiir Beyle oo ka hadley shir Bangiga Adduunka iyo IMF,” la...